Sidee Bank Islaamku u isticmaalayaa DuitNow? - Naadiga Muslimka
Sidee Bank Islaamku u isticmaalayaa DuitNow?
Sidee baananku ugu wareejinayaa DuitNow Bank Islam?
Bank Islam ma samayn karaa wareejin degdeg ah?
Waa maxay DuitNow ee Bangiga Islaamka?
DuitNow ma si degdeg ah baa?
Sideen ku ogaan karaa cidda lacagta ugu soo xawishay bangigayga Islaamka?
Sideen u burin karaa wareejintayda DuitNow?
Intee in le'eg ayay qaadanaysaa in lagu wareejiyo Bankiga Islaamka?
Waa maxay farqiga u dhexeeya wareejinta degdega ah iyo DuitNow?
Waa maxay wareejinta degdega ah?
Bank Islam ma leeyahay mobile app?
Waa maxay khidmadaha Bidc ee Bangiga Islaamka?
Sidee baan xisaab bangi uga furan karaa Islaamka?
Intee in le'eg ayay u tahay wareejinta degdega ah?
Sideed lacag uga heshaa DuitNow?
Sidee baad u hubin kartaa haddii aan haysto DuitNow?
DuitNow QR, waxaad sawiran kartaa koodka DuitNow QR si aad ugu bixiso baayacmushtarka ama lacag ugu wareejiso qof kale. Waxa kale oo aad lacag ku heli kartaa adiga oo dooranaya "Scan me" ee bogga sawir-qaadista, oo soo bandhig code-kaaga DuitNow QR si ay kuwa kale u sawiraan.
Soo gal Internet Banking. Aad Xisaabtayda > Taariikhda Macaamilka Bangi ee Internetka iyo dooro Wareejinta DuitNow.
Wareejinta degdega ah waa adeeg jira oo jira Waxay kuu ogolaanaysaa inaad lacag ka soo xawilato bangiga Islamka una wareejiso bangiyada kale ee Malaysia. Hore u socoshada, adeegan waxa loo yaqaan DuitNow (Bixi Akoonka).
DuitNow waa adeeg lacag wareejin online-waqtiga dhabta ah kaas oo siiya macmiisha iyo milkiilayaasha meherada ikhtiyaarka ay ku xawilaan lacagta iyaga oo isticmaalaya nambarka akoontiga ama aqoonsiga loo yaqaan Aqoonsiga DuitNow.
DuitNow wareejintu waa degdeg. Qaatahu waxa uu sanduuqa ku heli doonaa akoonkiisa isla markaaba ka dib marka wax kala iibsigu dhamaado oo guulaysto.
WAA XIISO: Su'aashaada: Waxaad sheegtaa magaca masaajidkii ugu horeeyay ee laga dhisay Kashmir?
Q18. Halkee ayaan ka hubin karaa heerka wax kala iibsigayga kadib markii aan sameeyay wareejinta DuitNow? Soo gal Bangiga Islam Internet Banking. Tag Xisaabadeyda> Taariikhda Macaamilka Bangi ee Internetka oo dooro Wareejinta DuitNow.
Dib-u-dejinta Aqoonsiga DuitNow iyada oo la sii marayo Maybank2u Web
Soo gal Maybank2u.
Guji 'Bix iyo Bedel'
U beddel koontada aad rabto inaad iska saarto
Guji 'Haa' si aad u tirtirto / 'Deactivate Temporarily' si aad u sii waddo ka laabashada aqoonsiga DuitNow.
Waqtiga goynta macaamilka
Helitaanka lacagaha* (illaa 12:00 saqda dhexe)
Maalinta Ganacsiga (Isniin - Jimce) Daaqadda 1: Kahor 5:00 subaxnimo Isla maalintaas 11:00 subaxnimo
Daaqadda 2: 5:01 subaxnimo ilaa 8:00 subaxnimo Isla maalintaas 2:00 galabnimo
Daaqadda 3: 8:01 subaxnimo ilaa 11:00 subaxnimo Isla maalintaas 5:00 galabnimo
Daaqadda 4: 11:01 subaxnimo ilaa 2:00 galabnimo Isla maalintaas 8:00 galabnimo
IBG waa Wareejin Lacageed oo daahsan iyada oo aan la ansixin lambarka koontada ka-faa'iidaystaha iyo magaca. DuitNow to Account (wareejinta degdega ah) ayaa kuu ogolaanaysa inaad dib u eeg magaca ka faa'iidaystaha Markaad soo gudbiso tafaasiisha akoontiga si loo hubiyo in akoontiga aad lacagta u wareejinayso uu sax yahay.
Wareejin degdeg ah waa si aad lacag ugu dirto ama aad lacag uga bixiso akoonkaaga bangiga isla markaaba adigoo isticmaalaya PayPal. Haddii isku dayga labaad uu sidoo kale guuldareysto, Wareejinta degdega ah waxaa lagu dalaci kaarka kaydka ama kaarka deynta ee loo isticmaalo lacag bixinta.
The Codsiga waa bilaash waxaana lagala soo bixi karaa Google Play Store (loogu talagalay Android) ama App Store (loogu talagalay iOS).
WAA XIISO: Gabayo ma ogolyahay islaamka?
BIDC-i waxay ku salaysan tahay fikradda Cujrah halkaas oo uu lacag u bixiyo dhinac ka faa'iidaysiga adeegyada uu bixiyo dhinaca kale. Ujrah waxay dhacdaa marka uu kaadhka haystaha ogolaado oo uu bixiyo khidmadaha iyo khidmadaha uu Bank Islaamku ku soo rogay adeegyada loo isticmaalo isticmaalka BIDC-i.
Buuxi Virtual-ka Furitaanka Akoon foomka codsiga hoose oo guji soo gudbi.
Booqo doorashadaada Bangiga Islaamka laanta 30 maalmood gudahooda ee codsiga oo ay la socoto warqadda xaqiijinta.
Dhameystirkaaga Furitaanka Akoon Ka baar laantayada oo hel kaaga account tirada.
Waa maxay xawilaadaha degdega ah, imisa ayayse ku kacayaan? Wareejinta degdega ah waxay kuu ogolaanaysaa inaad lacag uga soo dirto Venmo una dirto akoon bangi US ah ama kaarka deynta Visa/Mastercard, caadi ahaan 30 daqiiqo gudahood. Kharash 1% ah (oo leh khidmad ugu yar $0.25 iyo khidmadda ugu badan ee $10) ayaa laga jarayaa xadiga wareejinta kasta.
Si aad lacag-bixinta DuitNow uga hesho lambarkaaga mobaylka, NRIC ama Diiwaangelinta Ganacsiga, waxaad u baahan doontaa inaad samayso hal mar iska diiwaan geliso bangigaaga si aad akoonkaaga bangiga ugu xidho nambarkaaga gacanta, NRIC ama nambarka Diiwaangelinta Ganacsiga.
Dhammaan aqoonsiga DuitNow ee la heli karo waxay ku taxan yihiin DuitNow Page Dayactirka kaas oo inta badan laga helo "Settings" ee Internetka ama Banking Mobile. Waxaa jira xaalad diiwangelinta aqoonsiga DuitNow kasta oo qeexaysa akoontiga bangiga ee ku xidhan.
WAA XIISO: Su'aal: Muxuu Allaah Qur'aanka ugu sheegay naftiisa?
Jilbaab looma baahna. Surwaal ballaadhan iyo shaadh gacmo-dheer waa inay fiicnaadaan,
Khamr ( Af-Carabi : خمر ) waa kelmad Carabi ah oo lagu sakhraamo; (qaab jamac ah, Khumur (Carabi:
Wejiga beddelaadda subliminals ma Xaaraan? Haa Subliminals jireed oo aad u baddalaya sida midabka indhaha
Dawladda Maraykanku kuma jirto arrimaha diinta, waana sababtaas
Su'aasha soo noqnoqota: Biyo quduuska ah ma ku jiraan Islaamka?
Biyaha Zam Zamku waa muqadas diinta islaamka dhexdeeda, waxsoosaarkooduna waxa lagu qoray diinta islaamka
Waa maxay cuntooyinka Xarameynka qaarkood?
Cuntooyinkee ayaa mamnuuc ka ah Islaamka? Sida Qur'aanku sheegay, cuntooyinka kaliya ee si cad u ah
Su'aal: Mongols ma soo afjareen waagii dahabiga ahaa ee Islaamka?
Su'aal: Sidee Islaamku u hor istaagay horumarka caafimaadka?
Sheeg magaca aayadda quraanka?
Kacbada yaa dumin doona?
Wadamadee Sunni iyo Shiico ah?
Waxaad waydiisay: Beta-carotene ma xalaal baa mise waa xaaraan?
Ciiddu ma fasax baa USA?